Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.Akkasuumas qindaa'ina kana fuula caancalaa Maraa irraa filachu nidandeessa.
Wraps text on all four sides of the border frame of the object.Sajoon kun dirqala Maraa Fuulaa fuula caancalaa Maraa irraa bakka-bu'a.
Places the object in front of the text.Akkasuumas qindaa'ina kana fuula caancalaa Maraa irraa qindeessuu nidandeessa.
Goodayyaa filatame, goodayyaa itti aanuutti geessa. Barruun ofumaan goodayyaa tokko irraa gara kan birraatti yaa'a.
Goodayyaale walqabsiisuu dhiisi
Geessituu goodayyaawwan lama gidduutti qurxa. Geessituu isa goodayyaa filatame irraa hamma goodayyaa galteetti bal'atutti qofa qurxuu dandeessa.
Title is: Kabala Goodayyaa